Madaxda Afrika Iyo Safarada Caafimaad Ee Ay Ku Tagaan Dalalka Shisheeye – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
11:13 am » GUUGUULE IYO MAANTA
11:10 am » Madaxweyne Biixi Oo Ka Hadlay Qaddiyadda Baasaaboorka Somaliland Iyo Ku Tagi-taanka Dalka Imaaraadka Carabta
11:03 am » Cirro Oo Ka Hadlay Sababta Uu Uga Baaqday Weftiga Madaxweynaha, Farriina U Diray Madaxda Soomaaliya
11:01 am » Soo Bixidda Buugga ‘AMIINA ALMUFTI’ Iyo Ereyada Ay Masuuliyiin Miisaan Lihi Ka Yidhaahdeen Buugga
10:59 am » Heshiiska Dekeda Berbera Oo Somaliland Ku Soo Jeediyay Warbaahinta Caalamka
Madaxda Afrika Iyo Safarada Caafimaad Ee Ay Ku Tagaan Dalalka Shisheeye
Published on Aug 13 2017 // Warar
Madaxwaynayaasha Nigeria, Angola, Zimbabwe, Benin iyo Algeria ayaan dhammaantood kalsooni ku qabin adeegyada caafimaad ee wadamooda. Waxayna wakhti badan ku bixiyaan wadamada dibada si ay isu daaweeyaan.
Madaxwaynaha Nigeria Muhammadu Buhari oo 74 sano jir ah ayaa kamid ah madaxda Afrikaanka ah ee dibada ugu baxa adeegayada caafimaad. Hoggaamiyayaasha waddamdaan ayaa sanadihii ugu danbeeyey safaro dhowr ah u galay wadamada reer galbeedka si ay isugu soo daweeyaan.
Wadamada ay ka taliyaan ayaa adeegyada caafimaad yihiin kuwo liita, halka shacabka wadamadaasina ay ku tiirsanyihiin
2010-kii cel-celis ahaan lacagta ay ku kharash gareeyeen caafimaadka halkii qofba ee wadamdaas waxaa lagu qiyaasya $135, halka wadamada dakhligoodu sarreeyo ay ka tahay $3.150.
Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in tusaale ahaan dalka Zimbabwe in cisbitaalada ay dawladdu maamusho iyo goobaha kale ee caafimaad ay gabaabsi ku tahay dawooyinka sida kuwa loo cuno xanuun baab'inta. Waxaana aad u hooseeya adeegyada ay shacabku ka helaan goobahaas.
Halka dalka Nigeria adeegyada caafimaadku ay meelaha qaar gabaabsi yihiin, sababtoo ah ma jiraan maalgelin ku filan oo ay ka helaan dawladda dhexe.
Dadka shacabka ayaa inta badan ku tiirsan adeegyada caafimaadka ee ay bixiyaan dawladuhu, waxaana dadka lacagta leh ay daawaynta u raadsadaan goobaha caafimaad ee sida gaarka ah loo leeyahay.
Madaxwaynaha Nigeria ayaa muddo afar bilood ah ku qaatay magaalada London ee UK, halkaas oo looga daawaynayay xanuun aan ilaa hadda la garanayn nooca uu yahay. Waxaana uu xilka kaga sii tegay ku xigeenkiisa.
Madaxwaynaha Zimbabe Robert Mugabe ayaa xilka madaxtinimo ee dalkaas hayay ilaa 1980-kii, Waxaana la sheegayaa in dalka uu ka maamulo sariir uu caafimaad ahaan u jiifo, kadib markii uu saddex jeer caafimaad u tagay Singapora sanadkan oo keliya.
Madaxwaynaha Angola Jose Eduardo oo isna dalkiisa maamulayay 38 sano ee lasoo dhaafay ayaa dhowr jeer safar u tagay Spain sababo lagu sheegay caafimaad.
Afhayeenka mucaaradka Evaristo Da Luz, ayaa sheegay in ay tani caddayn u tahay wax qabad la'aanta dawladda mudadii ay xilka haysay.
Xaaladda caafimaad ee madaxwaynaha Algeria Abdelaziz Bouteflika oo jira 80 sano, ayaan wax war ah laga hayn muddo dheer.
Wuxuu xanuusanayay tan iyo sanadkii 2013-kii, waxaana markii ugu horraysay la arkay isaga oo ku socda gaadhiga curyaamiinta 2014-kii, halka mar saddexaadna la arkay isaga oo loo wado dalka Faransiiska oo uu caafimaad u tagay.
Dalka Benin ayaa waxaa xilka madaxtinimo haya nin da' ahaan ka yar madaxda kale waxaana uu dhankiisa safar u tagay Faransiiska bishii June. iyadoona lagu sameeyey laba qalliin oo kala duwan. Mid kamid ah ayaa ahaa qaliin kansarka ku dhaca taranka ragga halka mid kalena uu ahaa habdhiska dheef shiidka
Ma jiro afhayeen dawladeed oo ku sheegay sababta madaxdu dibada u tagaan in ay tahay adeegyada caafimaad ee wadamadaas oo fiican.
Afhayeenka Mugabi, ayaa ka gaabsaday in uu faah faahin ka bixiyo sababta madaxwaynuhu dhowr jeer u tagay Singapora, isaga oo ku dooday inaan arrintaas looga tusaale qaadan karin adeegga caafimaad ee dalka.
George Charamba ayaa intaas ku daray inaan dhakhaatiirta madaxaynuhu u dhalan Zimbabe oo keliya, " Maaha Zimbabwi-yaan oo keliya, runtii waa madow… aad iyo aad ayuu madaw u yahay".
Arrintan oo loo arko in ay tahay "dalxiis caafimaad", ayaa waxaa hormuud u ah madaxda siyaasada oo malaayiin doolar ku bixiya wadamada ay adeegyada caafimaad u raadsadaan.
2013-kii celi-celis ahaan dadka reer Nigeria ayaa caafimaadka ku bixiyay $1 bilyan oo doolar oo ay u tageen dibada, waxaana la qiyaasayaa in tiradu ay laba jibaar noqotay.
Dhakhaatiirta ugu fiican Nigeria ayaa ka hawlgala wadamo dibadda ah, iyaga oo raadinaya dhaqaale ka fiican kan ay ka helayana dalkooda.
Dr Enabulele ayaa u sheegay madaxwaynaha Nigeria in adeegyada caafimaad ee uu u tagayo dibadda uu ka heli karo dalkiisa.
Marka si guud loo eego, maalgelin la'aanta caafimaad ee dalalkaas, ayaa ah dhibaatada ugu wayn ee haysata.
Madaxwaynaha Suudaan Cumar Al-bashiir ayaa bishii January baaritaan dhanka wadnaha ah looga sameeyey isbitaal ku yaalla magaalada Khartuum. Balse wuxuu mid si gaar ah loo leeyahay oo ma ahayn mid ay dawladdu maamusho.
Archives Select Month March 2018 (105) February 2018 (171) January 2018 (195) December 2017 (212) November 2017 (163) October 2017 (201) September 2017 (214) August 2017 (258) July 2017 (172) June 2017 (214) May 2017 (223) April 2017 (240) March 2017 (149) February 2017 (239) January 2017 (295) December 2016 (271) November 2016 (257) October 2016 (233) September 2016 (216) August 2016 (217) July 2016 (220) June 2016 (226) May 2016 (254) April 2016 (226) March 2016 (235) February 2016 (209) January 2016 (240) December 2015 (174) November 2015 (219) October 2015 (218) September 2015 (215) August 2015 (223) July 2015 (206) June 2015 (201) May 2015 (218) April 2015 (214) March 2015 (229) February 2015 (199) January 2015 (215) December 2014 (225) November 2014 (236) October 2014 (212) September 2014 (217) August 2014 (229) July 2014 (225) June 2014 (243) May 2014 (236) April 2014 (236) March 2014 (188) February 2014 (148) January 2014 (174) December 2013 (173) November 2013 (176) October 2013 (178) September 2013 (168) August 2013 (140) July 2013 (117) June 2013 (110) May 2013 (147) April 2013 (132) March 2013 (154) February 2013 (154) January 2013 (142) December 2012 (83) November 2012 (117) October 2012 (162) September 2012 (101) August 2012 (172) July 2012 (213) June 2012 (82) May 2012 (56) April 2012 (48) March 2012 (74) February 2012 (46) January 2012 (46) December 2011 (61) November 2011 (80) October 2011 (58) September 2011 (48) August 2011 (117) July 2011 (149) June 2011 (137) May 2011 (80)
GUUGUULE IYO MAANTA March 18, 2018
Madaxweyne Biixi Oo Ka Hadlay Qaddiyadda Baasaaboorka Somaliland Iyo Ku Tagi-taanka Dalka Imaaraadka Carabta March 18, 2018
Cirro Oo Ka Hadlay Sababta Uu Uga Baaqday Weftiga Madaxweynaha, Farriina U Diray Madaxda Soomaaliya March 18, 2018
Soo Bixidda Buugga ‘AMIINA ALMUFTI’ Iyo Ereyada Ay Masuuliyiin Miisaan Lihi Ka Yidhaahdeen Buugga March 18, 2018
Heshiiska Dekeda Berbera Oo Somaliland Ku Soo Jeediyay Warbaahinta Caalamka March 18, 2018
Bulsho Kastaa Farxaddeeda Nafsiga Ah Waxa Ay Ku Gaadhaa Si U Gaar Ah Oo Dhaqankeeda Waafaqsan
Haweenka Wadaadada Kiristaanka Ah Ee Soorooyinka Loo Yaqaanno Oo Ku Cawday In Kaniisaddu Ku Danaysato
Lix Daqiiqadood Gudahood Ayaa Ay Ku Xadeen 5 Milyan Oo Doolarka Maraykanka Ah
Khudrado Ka Hortag U Noqon Karta Xanuunnada Gulukoomada, Caadka Iyo Xanuunnada Aragga Dila
Youtube Oo 125 Dal U Suurtagelinaya In Fiidyowyada Lagu Soo Degisan Karo, Laguna Daawan Karo Internet La’aan
Sababaha Cudurrada Wadnaha Ku Dhacaa Ay Dumarka Ugu Bataan: Qalbi-Jabka Badan, Ololka Jidhka, Iyo Guud Ahaan Xaaladaha Nafsiga Ah (Q.2aad)